Yakanakisa Welding-mutsipa Flange Mugadziri uye Fekitori | Puyang
Welding mutsipa flange ane maviri mafomu (maumbirwo), imwe ine yekudzora mutsipa sezvatakadaidza kudzora weld mutsipa flange; Imwe iine dhayamita yakaenzana yemutsipa wakareba wakatumidzwa seyakareba mutsipa weld flange.
Weld neck flange (WN flange) ine mutsipa unogona kutamisazve kusagadzikana kwepombi, saka kudzikisira kumanikidza kwakaungana muzasi peiyo flange. Inoenderana nepombi dzinoshanda mukukwirira kana kwakadzika tembiricha uye inotakura yakasimba. Kunyanya pombi kana mavhavha apo PN yakakura kudarika 2.5 Mpa.
Mafomu uye Zvimiro
1. Ndeupi rudzi rwechinhu icho chigadzirwa chigadzirwa?
Stainless Simbi uye Aluminium
2. Ndeapi marudzi erudzi iwe aunogona kupa?
Welding mutsipa Flange
Yakareba yekutenderera mutsipa flange
Pamakumbo joini flange
3. Ndeapi marudzi epakeji iwe aunogona kupa?
Makreyiti kana nhovo
4. Ndezvipi iwe pamwedzi kugadzirwa kugona?
300TON / Mwedzi
5. Ndeipi chiteshi chepedyo?
Shanghai Gungwa Port
6. Unobvuma here wechitatu bato kuongororwa?
Ndokumbira utumire meseji yako kwatiri kana iwe uine chero mibvunzo kana kubvunza, isu tinokupindura mukati maawa gumi nemaviri!
Pashure: Yakasungirirwa Flange
Zvadaro: Blind Flange